Ebe 6 na Senegal nke ị na-agaghị echefu | Akụkọ Njem
Ebe 6 dị na Senegal ị gaghị echefu
Maria | | Afrika, Senegal
E jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ dị n'Africa, Senegal nwere ezigbo akụrụngwa ndị njem yana ọ dịkwa mma, kwụsie ike ma nabata ndị njem. N’ezie, n’Africa a na-ekwukarị na ọ bụ obodo “teranga” nke n’asụsụ obodo pụtara ile ọbịa.
Enweghị otu ihe mere ị ga-eji gaa Senegal n'ihi na enwere ọtụtụ ihe kpatara ịme ya. Ha nwere Ogige Ubi National mara mma ebe ị nwere ike ịtụle anụ ọhịa na nnwere onwe na ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ọdịdị dị iche iche, site na mangroves ruo n'ọzara na-agafe mpaghara ebe okpomọkụ.
Oké osimiri ya na-adịghị agwụ agwụ, ụkpụrụ ụlọ ndị mara mma nke ọchịchị, nke ngwakọta ngwakọta, na ahịa ya ndị mara mma ga-adọrọ mmasị gị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịmara akụkọ ihe na-akpali mmasị nke Senegal na agbụrụ na ọdịbendị dịgasị iche iche.
Na nkenke, mba Africa a nwere ihe niile eji eme njem agaghị echefu echefu. Iji mezuo nke a, anyị na-enye gị ụfọdụ echiche nke ebe ị ga-eleta na ụfọdụ ndụmọdụ iji mee ka njem gị dị larịị dịka o kwere mee.
2 Isuo Gorée
3 Gaa na mba Bassari na Bédik
4 Osimiri Pink
5 Dindefelo nsụda mmiri
7 Ndụmọdụ maka ileta Senegal
Dịka m kwuru na mbido post, ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ dị n'Africa, Senegal nwere akụrụngwa njem nleta dị mma ma bụrụ mba nnabata na ndị njem nleta. Ikekwe maka ụfọdụ ndị mmadụ, ọ bụghị ebe jupụtara na nkasi obi mana ọ nwere ebe mara mma ileta, dịka isi obodo ya.
Dakar bụ ebe ọdịda anyanwụ nke mpaghara Afrika na isi obodo kemgbe 1960. N'okporo ámá ya na n'ámá ya, ọ ka ga-enwe ike ịghọta ihe nketa nke ndị ọchịchị.
Fọdụ n'ime ihe ndị kasị mara ebe na-egosi na akụkọ ihe mere eme nke Dakar bụ:
Mpaghara nke Barrio de Plateau ma ọ bụ Barrio de la Medina.
Plaza de la Independencia ebe enwere ụlọ French dịka Chamber of Commerce or the Ministry of Foreign Affairs.
Katidral Dakar, nke e wuru na 1929.
Presidentiallọ ndị isi ala wuru na 1906.
Ahịa Kermel, ahịa Sandaga ma ọ bụ ahịa ahịa Soumbédioune.
Gbọ okporo ígwè ochie ahụ.
ANlọ IFAN nke African Arts.
Alakụba Ouakam n'akụkụ ụsọ oké osimiri.
Pointe des Almadies ma ọ bụ osimiri nke Dakar dị ka Yoff.
Ememe Ncheta nke Afrika na echiche di egwu nke obodo ahu dum site na ugbua.
A kilomita ole na ole site n'ụsọ oké osimiri nke Dakar na nkeji iri abụọ site na ụgbọ oloko anyị na-ahụ Island nke Gorée, nke bụ akụkụ nke World Heritage nke Humanity site na Unesco kemgbe 1978. Malite na narị afọ nke XNUMX, ọ ghọrọ otu n'ime Saleslọ Ọrụ Ahịa Ndị ohu maka ndị Portuguese, Dutch na French.
N’ebe a ị nwere ike ịga otu n’ime “ụlọ ndị ohu” iji mụta ebe ebe ndị ohu na-aga America ga-adị. Na akụkụ elu enwere ngosipụta na akụkọ ihe mere eme ya na ihe gbasara njikwa nke ndị ohu dị ka agbụ na ndị ọzọ.
Agbanyeghị, n'ebe a enwere ohere maka ebe nchekwa nke ndị ahụ nke ihe ncheta maka ntọhapụ nke ndị ohu.
Ndị ọzọ nke agwaetiti Gorée na-adọta uche maka ahịa ya ndị mara mma, n'okporo ámá ndị ọchịchị na-emetụta, ụlọ ọrụ aka na ụlọ nri ndị na-ele anya n'oké osimiri.
Gaa na mba Bassari na Bédik
Ebe dị anya site na Dakar mana nke ọma ịmara bụ Eastern Senegal, nke na-enye ndị njem otu mpaghara pụrụ iche a maara dị ka Obodo Bassari. Ọ bụ mpaghara dịpụrụ adịpụ nke mba ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ime obodo kachasị mma n'Africa.
Gburugburu ebe obibi dị egwu nke na-akpọ anyị ka anyị mata ókèala nke ụfọdụ ndị ọdịnala ọdịnala nke mba ahụ dịka agbụrụ Bassari ma ọ bụ agbụrụ Bédik na Peul. Na mpaghara a anyị nwekwara ike ịrịgo otu ugwu pere mpe na Senegal n'ihi na ọ dị larịị. Site na ebe a anyị nwere ọmarịcha echiche banyere amaala Afrika dị egwu.
Foto | Hayo Magazine
Near Dakar e nwere a ọchịchọ ịmata eke onu na-atụgharị mmiri nke Lake Retba pink, onye bụ mbata ebe nke Paris-Dakar ọtụtụ afọ gara aga.
Colordị mmiri a na-adịghị ahụkebe bụ n'ihi ntinye nke mineral, microorganisms na nnu. Ọ bụ ebe pụrụiche iji see foto izizi.
Dindefelo nsụda mmiri
N'ịbụ nke dị kilomita 35 site na Kedougou na obere ụzọ site na Guinea, nsụda mmiri Dindefelo abụghị naanị paradaịs nkịtị mana ọ bụkwa ebe dị omimi maka agbụrụ ndị gbara ya gburugburu. Ọ bụghị ebe dị mfe ịnweta ma ọ bara ezigbo uru ileba anya na gburugburu ebe obibi ya na ike ya, na mgbakwunye, dịka mmiri nke mmiri dị elu nke 100-mita na-adakwasị gị.
Okirikiri ala dị na mpaghara ndịda a nke Senegal dị nnọọ iche na mba ndị ọzọ. Ọ bụ ebe na-eme nri nke nwere ahịhịa ndụ mara ama nke amaara dị ka ọba mba.
Oge okpomọkụ bụ oge mmiri ozuzo mana enwere ọtụtụ ebe ị ga-enyocha na Casamance dị ka Carabane Island (ebe ị nwere ike ịhụ dolphins), Oussouye, mangroves dị na Seleki ma ọ bụ Cap Skirring, nke nwere ụsọ osimiri kachasị egwu na Senegal.
Ndụmọdụ maka ileta Senegal
Citizensmụ amaala Spanish anaghị achọ visa ebe ọ bụ na 2015 ịbanye Senegal maka ịnọ na-erughị ọnwa atọ. Ibanye Senegal paspọtụ gị ga-adị ire karịa ọnwa isii.
Banyere ọgwụ mgbochi, ọ kacha mma mgbe niile ịrịọ nhọpụta ma gaa na Vlọ Ọrụ Ọgwụ Mba nke kacha nso na mpaghara gị. N’ebe ahụ ka otu ọkachamara ga-agwa gị.
Nyere ụlọ ọrụ ahụike ole na ole na mba ahụ, ọ kachasị mma ịme mkpuchi mkpuchi njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Ebe 6 dị na Senegal ị gaghị echefu
Hoi An, pealu nke Vietnam